JAJAB: KALOORIYE IYO QUDAAR-SAARID, INTA BJU-GA AH 100 GARAAM, GARGAARKA CAAFIMAADKA IYO WAXYEELLADA, IYO SIDOO KALE BOGSIINTA GURYAHA, OO AY KA MID YIHIIN JIRKA HAWEENKA - BEER CAGAARAN
Halabuurka iyo tufaaxa kalooriyada. Faa'iidooyinka iyo waxyeelada khudaarta jirka
Maqnaanshaha, jilicsan oo casri ah. Ereyadani waxay si qarsoodi ah u sharxi karaan tufaaxa. Khudradda caleenta ah wuxuu ahaa dhakhtar ee Suuriya, ma aha mid qarnigii hore. Ka dib markii uu bilaabay inuu safro adduunka.
Markii ugu horeysay ee aan tayo lahayn ayaa ka soo muuqday Ruushka qarnigii 18aad, laakiin muddo dheer ma aysan qaadan karin xididka. Dhaqanka Caadiga ah wuxuu ahaa mid aad u qaali ah oo keliya qaniinyada hodanka ah ayaa awoodi kara. Laakiin thanks to dadaalka of breeders, khudradda this faa'iido lahaa on miisaska iyo beeraha.
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa faa'iidada leh tayo-qallajin, marka uu ka-hor-tago iyo sida loo isticmaalo si haboon.
Aan tufaaxa ee uu ka kooban waxay leedahay walxo badan oo faa'iido leh.Kani wuxuu ka sareeyaa noocyada kale ee kaabash. Cunto badan ayaa laga heli karaa kaabajka cayriin (ma jiri doonto wax waxyeelo ah oo aan la karinin, laakiin waxaa jiri doona fitamiino yar).
Caawimaad! Aan tayo lahayn waa in aan la daaweynin daaweyn kulul oo dheeraaday.
Halkan waxaa ku yaalla fitamiino ku jira khudradda:
omaga-3 acids fatty;
Marka laga soo tago fitamiino, mishiinka kaabashka waxaa ku jira tiro ah macro-iyo mareeyn.: Calcium, potassium, magnesium, iodine, manganese, selenium, copper, chlorine, zinc, birta, fosfooraska, sodium.
Iyo tayo lahayn waa dukaanka birta, taas oo laba jeer ka weyn sida khudaarta cagaaran.
Sidoo kale qayb ka mid ah wax soo saarka cuntada ayaa la heli karaa:
tartron, citric, malic acid.
Dadka ku jira cuntada iyo kormeerka qiimaha tamarta ee cuntada, index of KBD waa muhiim, taas oo ah, inta kcal (kalori), 100 garaam oo tayo leh, borotiinno, dufan iyo carbohydrates.
Sheyga, inkastoo qiimaha nafaqada sarreysa, waa kaloori hooseeya.. Waxyaabaha kalooriga ah ee 100 garaam oo khudaarta ceyriin ah - kaliya 30 kalori.
Sababtaas awgeed, si sahal ah ayay u baabi'in kartaa dadka culeyskoodu sarreeyo. Qiimaha nafaqada halkii 100 g: borotiinka - 2.5 g, baruurta - 0.3 g, karbohidrat - 5.4 g.
Tilmaamaha iyo Khilaafaadka
Inkasta oo ay jirto baahsanaan ballaadhan, faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka tayo-qashin, gaar ahaan, sifooyinka wanaagsan ee bogsashada, weli wali si buuxda looma baarin. Laakiin, oo ku saleysan xaqiiqooyinka si buuxda loo xaqiijiyay, waxaad si ammaan ah u sheegi kartaa waxyaabaha ku saabsan faa'iidooyinka iyo khasaaraha ka mid ah badeecadan, iyo sidoo kale ka hadlidda joogitaanka qaar ka mid ah khilaafaadka. Ka akhriso wax badan oo ku saabsan halkan.
Yaa iyo sidee ayaa loo isticmaalaa sheygan?
Qodobka sare ee fiitamiin C wuxuu adkeeyaa nidaamka difaaca jirka, wuxuu xakameynayaa habka gabowga, wuxuu saameyn wanaagsan ku yeeshaa habka dhexe ee neerfaha.
Fiber wuxuu saameeyaa habka dheef-shiidka, wuxuu ka caawiyaa inuu nadiifiyo jirka sunta iyo sunta.
Saliidda macdanta waxay hagaajinaysaa dheef-shiid kiimikaadka, ka caawinta in laga saaro dheecaanka xad-dhaafka ah ee jidhka, oo saameyn ku leh nidaamka wadnaha iyo xididdada.
Sidoo kale muhiim u ah wadnaha waa joogitaanka potassium, taas oo caadiyan garaaca wadnaha iyo cadaadiska dhiigga.
Beerjiruhu wuxuu hoos u dhigaa kolestaroolka aan loo baahnayn. Waxay caadi u tahay qayb ka mid ah maaddada lipids. Sidaa darteed, khudradda waa la cunaa sidii looga hortagi lahaa atherosclerosis.
Faa'iidada kaabajka ah waa in la ilaaliyo heerka ku filan ee gulukoosta jirka, taas oo si gaar ah muhiim ugu ah sonkorowga.
Qayb kale oo kale - molybdenum ayaa faa'iido u leh dhalada iliga.
Birta ayaa ah qaybta ugu weyn ee unugyada dhiigga cas ee keena oksijiinka unugyada. Iyadoo ay la'yihiin dhibaatooyin la'aanta qanjirka thyroid.
Iyada oo la isticmaalayo isticmaalka tufaaxa cuntada, waxaad ka hortagi kartaa horumarinta kansarka khatarta ah. Natiijada ka soo baxday baadhitaanada tijaabada ah, glucosinolate walax laga helay walxaha khudradda, taas oo ay la socoto walxo kale oo jidhka ka mid ah, isbedelaya isothiocyanates. Noocida noocan oo kale ah waxay keenaysaa in si weyn loo yareeyo unugyada kansarka waxayna yareeyaan koritaanka burooyinka malignantiga ah.
Saameynta anti-bararka ayaa la muujiyay sababtoo ah joogitaanka qayb ka mid ah fitamiin K iyo amida-3 fatty acids. Maadooyinkani waxay xajiyaan hababka caabuqa.
Khudradda ayaa sidoo kale faa'iido u leh shaqada tayo sare leh ee maskaxda. Hagaajinta xasuusta, waxay kor u qaadaa hawlaha garashada.
Waxay muujinaysaa saameyn togan oo ku saabsan xubnaha aragtida, waxay ka hortagtaa horumarka cataracts.
Yaa waxyeelleyn kara?
Gawsoorka ayaa leh noocyo badan oo faa'iido leh, oo ay weheliso Waxaa jira dhowr arrimood oo xun, sababtoo ah qof kasta laguma talin in lagu daro khudaarta cuntada.Contraindications wuxuu khuseeyaa dadka ay hayso:
cudurrada caloosha oo ku jira marxaladda firfircoon ee ka sii darista;
boogaha qafiifka ah ee qaabka ugu xun;
oo leh fal-celin xasaasiyad shaqsiyeed;
Iyada oo ka kooban qaybo kala duwan oo dabiici ah, Tijaabadu waxay leedahay saameyn wanaagsan oo ku saabsan jidhka bini-aadanka guud ahaan. Maaddooyinka khatarta ah ee ku jira khudraddaas, waxay ka dhigaan mid qiimo leh.
Digniin! Nafaqeeyayaal ayaa kugula taliyay isticmaalka jeliska ragga, haweenka iyo carruurta. Xaalad kasta, faa'idooyinka ayaa shakhsi ahaan noqon doona.
Dhulka daciifka ah wuxuu u baahan yahay khudradan. Ka dib dhan Qaybaha kaabajka ah ayaa gacan ka geysanaya in la kordhiyo quruxda iyo dhalinyarada sannado badan. Aan tufaaxa ah ayaa loo isticmaalaa maaha oo kaliya cuntada cuntada, laakiin sidoo kale ujeedooyinka qurxinta, samaynta maaskaro iyo kareemo. Ujeedooyinka ugu muhiimsan ee isticmaalka khudaarta haweenka:
acid tartar waxay kaa caawineysaa yareynta dufanka bawdooyinka iyo caloosha;
loo oggol yahay isticmaalka xilliga uurka iyo nuujinta;
waxay bixisaa kahortaga kansarka naasaha;
waa calool jilciye, gaar ahaan qiimo leh dhalmada kaddib, adoo isticmaalaya tifaftire halkii daawooyinka kiimikada ah;
wuxuu hagaajiyaa dib u soocinta maqaarka;
wuxuu kor u qaadaa wax soo saarka kolajka, taas oo lagama maarmaan u ah ilaalinta maqaarka maqaarka;
maaskaro, ku leh kiniin ka kooban, kicin kobcinta iyo xoojinta timaha.
Cunnada ugu fiican ee lagu kariyo julka waa la heli karaa halkan.
Mashruucaan ma u yahay ragga? Sida laga soo xigtay tirakoobka, ragga ayaa badanaa ka walaacsan cudurrada la xidhiidha wadnaha. Sababtan awgeed, waxay faa'iido u lahaan kartaa in la cuno cayayaanka cuntada, taas oo runtii yaraynaysa khatarta cudurka. A haddii aad cunayso qiyaastii 100 g oo ah badeecada maalin kasta, halista kansarka qanjirka 'prostate' ayaa la yareeyaa 3 jeer.
Sida laga soo xigtay natiijooyinka khabiirada trichologists, joogitaanka khudradda waxtar leh ee cuntada ayaa ka caawisa in laga takhaluso xoqidda iyo xoqida marxaladda hore, sidoo kale waxay kordhisaa awooda dib-u-cusbooneynta unugyada si ay u koraan timaha.
Ragga qaba tufaaxa cuntadooda ayaa ah kuwo aad u adag oo firfircoon.. Sannado badan, hayso awoodda maskax ahaan.
Dhaqanka qudaarta ee cunnooyinka cunuga waxaa la soo saaraa sanadka ugu horeeya ee nolosha, sida saxan madax-bannaan ama qayb ka mid ah baradhada la shiiday ee badan. Sidee bay faa'iido u tahay carruurta? Marka ugu horeysa, waa shey muhiim u ah habka caadiga ah ee uur-qaadidda.
Qadar badan oo ah borotiinka qudaarta ayaa xoojiya unugyada lafaha iyo xididdada dhiigga.
Waa muhiim! Dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan inay isticmaalaan tufaaxa si loo kiciyo, loo hagaajiyo cunto xumida iyo in laga hortago abuuritaanka gaas, caloosha ilmaha.
Ku saabsan cuntada ugu fiican ee lagu karsado cayayaanka cunugga, akhriya maqaalkeena.
Intee in la cuni karaa, sidaa darteed khudradda ayaa faa'iido leh mana sameyso waxyeello jidhka ah? Maalintiiba qiimaha waa 250-300 g qof caafimaad leh.. Dadka qaba cudurrada caloosha iyo jidhka oo aan ka badnayn 10 g maalintii, iyo haddii aysan ahayn mudo sii kordhaya cudurrada joogtada ah.
Hooyooyinka kalkaaliyaasha ayaa loo oggol yahay inay isticmaalaan wax bilaa 1 bilood ka dib dhalashada. Qiyaasta maalintii oo dhan 150-200 g Marka aad uur leedahay, cun cunno ku salaysan xaaladda haweenka iyo falcelinta shakhsiyadeed ee alaabtan. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan shucaacada isticmaalka jeliska wakhtiga uurka iyo naas-nuujinta halkan.
Haddii aad go'aansato in lagu beero beeyo ku beerta beertaada, waxaan kugula talinaynaa in aad la tashato jilitaanka dalagyada sii kordhaya, iyo sidoo kale sharaxaadda noocyada ugu wanaagsan ee sawirrada.
Sababta dareen-celinta waa jiritaanka borotiinka, oo u dhaqma sida xasaasiyad. Ama shitinase walax, kaas oo kiciya habka loo helo qastiinka - enzyme protein.
Haddii qofku dareemo dareen-celin xasaasiyadeed, markaa walxahaas ayaa kicin kara.
Calaamadaha Xasaasiga ah:
dhirbaaxo fiiqan oo ku yaal meelihii afka, carrabka;
qufac deg-deg ah;
sanka oo dareema
Xaalado dhif ah, anaphylaxis.
Daaweyntu waxay tusinaysaa:
dhammaystirida ka-saarista tayo-qashinka;
booqashada qof xasaasiyad leh;
cuntooyinka 5-7 maalmood;
isticmaalka boomaatada dawooyinka ka baxsan ama kiriimyada;
isticmaalka sorbents ee nadiifinta mindhicirada.
Mabda 'ahaan, tayo-qajiyadu waa alerjiyo yar oo hooseeya. Dareenka xasaasiyadeed waa mid aad u dhif ah, gaar ahaan shakhsi ahaan. Khudradani waa badeecad cunto qiimo leh oo aan aheyn oo kaliya dhadhan fiican, laakiin sidoo kale faa'iido leh, iyo saamiga BJU waxaa ku haboon inuu lumiyo miisaanka iyo miisaanka. Isticmaal kaabajar noocyo kala duwan ah, taas oo kalliftay menukaaga.